Fonosana borosy 179 maimaimpoana ho an'ny Adobe Illustrator | Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | sary, borosy
Ny texturing dia asa tena mahaliana saingy azo tsorina amin'ny fomba mahery vaika raha manana fitaovana mety isika. Ny borosy dia fitaovana mandaitra mahomby amin'ny famoronana ny halaliny sy ny zava-misy ao amin'ireo singa ao amin'ny sanganay. Ao amin'ny Internet dia misy karazany marobe amin'izy ireo ary mamporisika anao aho mba hahazo katalaogy be dia be satria ireo karazana loharanom-pahalalana ireo hitondra fiovana amin'ny asanao.
Avy eo avelako fonosana ho anao Borosy 179 izay voasokajy ao anatin'ireto fomba manaraka ireto:
Borosy multicolor 57
Borosy setroka 10
Borosy kaleidoskopika 10
Borosy mamirapiratra 15
Borosy 13 grunge
Borosy mihosin-tsaoka 10
Borosy fanamafisam-peo 64
Tsy afaka mamatra na mametraka borosy ao amin'ny Adobe Illustrator? Misy fomba roa hanaovana an'io ary samy tsotra dia tsotra:
Raha tsy manana ny fampiharana mihazakazaka isika dia ampy hametahana ireo rakitra izay misy ny borosintsika ao anaty fampirimana izay manaraka ireto lalana ireto: (C: / Program Files / Adobe / Adobe Illustrator / Presets / Brushes). Ataovy ao an-tsaina fa ity lalana ity dia mety miovaova arakaraka ny solosaina tsirairay, ny rafitra fiasa na ny kinovan'ny fampiharana. Raha vantany vao ataonao izany, rehefa manomboka ny fampiharana ianao dia ho hita ao anaty paleta ireo borosy.
Raha mampiasa ny fisoratana anarana ianao amin'izao fotoana izao, ny mankany amin'ny paleta borosy ary tsindrio ny safidy «tranomboky hafa«. Raha vantany vao tsindrio ity dia hisokatra ny varavarankely fikarohana izay tsy maintsy alehanao amin'ny toerana misy ny tranomboky borosy tianao hapetraka. Araka ny ahitanao azy dia mitovy amin'ny fomba fampiasa ao amin'ny Adobe Illustrator.
Ankafizo izy ireo! Raha misy karazana olana, fisalasalana na sosokevitra, fantatrao, manontania tsy amin-tahotra;)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Fonosana borosy 179 maimaimpoana ho an'ny Adobe Illustrator
jrmanjarrez dia hoy izy:
Izy ireo koa dia ho an'ny Photoshop?
Valio amin'i jjmanjarrez
AHOANA NO FAKAKARAKOINA?
Valiny amin'i ERIK
Mba hampidinana azy ireo dia tsy maintsy tsindrio ny rohy ary hivily ho azy ho any amin'ny lozisialy misintona izy io. Raha manana olana ianao dia ampahafantaro ahy. Mirary ny soa indrindra!
Salama, vaovao aho amin'ny mpanao sary, efa vitako izay nolazainao saingy tsy tratrako ny fananana azy ireo amin'ilay tetikasa izay ataoko, azafady misaotra
Rodolfo vega dia hoy izy:
Misaotra ny fonosana borosy tiako ilay tranonkala, tontolon'ny famolavolana io.
Valiny tamin'i Rodolfo Vega
agui dia hoy izy:
Salama! Tsy afaka mampiasa azy ireo aho. Nataoko tsara ny fomba rehetra. Manana ny mpanao sary CC (2013)
satria efa antitra ny kinovako? Vonjeo!!!!!!!!